Steak pané - Recette de cuisine Malagasy de Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 10 novembre 2016
Tao aorinan’ny recette de steak chinois dia indro atolotra anareo anio ny recette de steak pané. Nikarakaraina tamin’ny fomba gasy ihany.
Fomba fikarakarana Steak pané
Lomana 30mn ao anatin’ny ail sy gingembre sy sauce soja sy sel kely sy poivre ny nofo-kena rehefa voafisaka sy voakapokapoka amin’ny rouleau na vodin antsy be hamakiana ny fibres ka halemy tsara.
Ampandalovina atody voakapoka nasiana sauce soja kely, avy eo chapelure dia endasina.
Ampiarahina amin’ny salade na lasary manga.
laoka malagasy, steak boeuf pané, steak haché pané recette, steak pané à l'italienne, steak pané recette
Article précédent : Steak chinois
Boulettes de porc aux légumesArticle suivant :